Soddoh-soddog - Cradle View
[Fadlan la soco in waxyaabahaan aan lagu marti galinin cradleview.net iyo Cradle View ayaan wax masuuliyad ah iska saareynin waxyaabaha ay isticmaalayaan isticmaale (adigu) boggan. Fadlan isticmaal oo arag dhammaan walxaha siday u kala horreeyaan. ]
Jacaylka Sharciga ah - Qeybta 1
Jacaylka Sharciga ah - Qeybta 2
Nasiib darro Lovers-in-law kaliya wuxuu soo bandhigayaa 2 dhacdo oo natiijada kaliya waxay leedahay 1 xilli. Saxiix noo soo dir emailkeena si aad uga hesho warar ku saabsan goorta Qeybta 3aad la heli doono (dhowaan).
Naga caawi hagaajinta bartayada
Fadlan ku qiimee boggan(Baahan yahay) 1 - Aad u Xun
2 - Miskiin
3 - Iskucelcelis
4 - Wanaagsan
5 - Aad u fiican
Sideen ku horumarin karnaa